Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Ihe nkwado US North East maka Hurricane Henri
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ebe ikuku na -agba ugbu a ruru 75mph, a na -atụ anya na Henri ga -akụ Long Island ma ọ bụ ndịda New England na Sọnde.
A kwalitere Tropical Storm Henri ka ọ bụrụ oke ifufe.
Enyere ịdọ aka na ntị ihu igwe siri ike na mpaghara ọwụwa anyanwụ US.
A na -atụ anya oke mmiri ozuzo, ebe National Hurricane Center na -adọ aka na ntị maka oke mmiri ozuzo ruru sentimita iri na mpaghara ụfọdụ.
A kwalitela Tropical Storm Henri taa ka ọ bụrụ oke ifufe site na US National Hurricane Center. A kwalitere Henri site na oke mmiri ozuzo gaa n'oké ifufe n'ụtụtụ Satọde, a na -atụkwa anya na ọ ga -ada na Sọnde.
Onye nchịkwa FEMA Deanne Criswell
Enyerela ịdọ aka na ntị ihu igwe siri ike na mpaghara ọwụwa anyanwụ US, ka Hurricane Henri na -aga n'akụkụ ugwu ọdịda anyanwụ n'ofe Atlantic.
Ebe ikuku na -agba ugbu a ruru 75mph, a na -atụ anya na Henri ga -akụ Long Island ma ọ bụ ndịda New England echi.
Ọ bụrụ na ọ daa na Long Island, ọ ga -abụ ajọ ifufe nke mbụ ga -eti ebe ahụ kemgbe Gloria na 1985. Ọ bụrụ na ọ daa na New England, ọ ga -abụ ajọ ifufe nke mbụ mere ebe ahụ kemgbe Bob na 1991, nke gburu mmadụ 15 wee kpoo ọkụ. ụgwọ nke mebiri ihe karịrị ijeri $ 1.5.
Henri na -ebute oke ikuku ugbu a ihe dịka 75mph (120kph) na US, a na -atụkwa anya na ọ ga -agbasi ike ka ọ na -eru ala. Enyerela ịdọ aka na ntị oke ikuku site na New York ruo Massachusetts. Ndị gọvanọ na steeti ndị a, yana Connecticut na Rhode Island, adụla ọdụ megide njem na -enweghị isi. Connecticut na Massachusetts akpọọla ndị otu National Nche ka ha rụọ ọrụ na -akwado maka ọbịbịa Henri.
A na -atụ anya oke mmiri ozuzo, yana National Hurricane Center ịdọ aka ná ntị nke ihe ruru sentimita iri nke mmiri ozuzo na mpaghara ụfọdụ. “Nnukwu mmiri ozuzo sitere na Henri nwere ike bute nnukwu idei mmiri, obodo mepere emepe na obere idei mmiri,” etiti ahụ dụrụ ọdụ, na -agbakwụnye na “oke mmiri ozuzo ma ọ bụ abụọ” nwere ike ime na New England na Sọnde.
Esoworị New England esichara mgbe ọtụtụ izu oke mmiri ozuzo gasịrị. Managementlọ Ọrụ Federal Management Agency (FEMA) Onye nchịkwa Deanne Criswell kwuru na Satọdee na ọnọdụ mmiri a pụtara na Henri nwere ike iwepụ osisi na ahịrị ọkụ, nke nwere ike ibute ụbọchị nkwụsị.
Ọ sịrị, "Anyị ga -ahụ ọkụ eletrik, anyị ga -ahụ osisi dara ada, ọbụlagodi mgbe oke mmiri ozuzo gafere, egwu nke ịdaba na osisi na aka na -ada ka dị,"